जीवन बीमा कम्पनीको दोस्रो त्रैमासमा को अघि को पछि ? – Insurance Khabar
जीवन बीमा कम्पनीको दोस्रो त्रैमासमा को अघि को पछि ?
प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १०:०७
हाल दोस्रो बजारमा ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुने गरेकोमा ७ वटै जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७५/७६को दोस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको अवस्था छ ।
इन्स्योरेन्स खबर टीमले जीवन बीमा कम्पनी बीच गरिएको तुलनात्मक अध्ययन
चुक्ता पूँजीको आधारमा:
बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब पूँजीको लक्ष्य दिएकोमा नेपाल लाईफ र नेशनल लाईफले मात्र सो लक्ष्य हासिल गरेका छन भने अरु ५ जीवन बीमा कम्पनीले सो लक्ष्य हासिल नगरेको अवस्था छ । सबै भन्दा थोरै पुँजी भएको कम्पनीमा गुराँस लाईफ पर्दछ । गुराँस लाईफको अहिले पुँजी ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र छ ।
जगेडा कोषको आधारमा:
जगेडा कोषमा नेपाल लाईफ नै अघि छ । नेपाल लाईफको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७३ करोड संचित छ भने प्राइम लाइफको जगेडामा ९७ करोड ९० लाख रुपैया छ ।
जीवन बीमा कोषको आधारमा:
जीवन बीमा कोषमा नेपाल लाईफ अघि छ । नेपाल लाईफको जीवन बीमा कोषमा ५६ अर्ब ७३ करोड छ भने लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालको जीवन बीमा कोषमा ४८ अर्ब ६८ करोड छ ।
कुल र खुद बीमा शुल्क आर्जन रकमको आधारमा:
नेपाल लाईफले १० अर्ब ६० करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गरको छ भने १० अर्ब ४७ करोड खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । नेपाल लाईफ पछि लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले ५ अर्ब ८१ करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ भने ५ अर्ब ७८ करोड खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।
खुद नाफाको आधारमा नेपाल लाईफ अघि छ । यो ६ महिनाको अवधिमा नेपाल लाईफले २८ करोड ५ लाख खुद नाफा गरेको छ भने नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले १७ करो८ ११ लाख खुद नाफा गरेको छ ।
कुल र खुद दावी भुक्तानीको आधारमा :
किताबी मूल्यको आधारमा:
प्रति शेयर नेटवर्थ (किताबी मूल्य)को आधारमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स अघि छ । नेपाल लाईफको किताबी मूल्य १९३ रुपैयाँ ३८ पैसा छ । उपलब्ध तथ्यांक कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण बाट तयार गरिएको हो, यो विस्लेषण पूर्ण होइन लगानीकर्ताले कारोवारको निर्णय लिनु अघि थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने छ ।